Ka ilaalinta software-ka iyo macaamiisha khiyaanooyinka? | Martech Zone
Ka ilaalinta software-ka iyo macaamiisha khiyaanooyinka?
Arbacada, Oktoobar 4, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waa macquul in qaar ka mid ah wareegii ugu xumaa ee aan abid ka akhriyo Burcad Badeedka Software!
Akhriso Qodobka: Barnaamijka Difaaca Software-ka ee Microsoft. Tani waxay u xun tahay sida Sharciga Wadaniyadda! (AKA: Waxaan u baahanahay inaan ilaalino xorriyadaada, waxaadna noqon doontaa wadani hadii aad ka tanaasusho qaar ka mid ah xoriyadaada si aan u ilaashano xorriyadaada…. Huh?). Microsoft waxay ahayd inay si fudud tan uga dhigto qoraal gudaha ah:
Mashruuca Ilaalinta Faa'iidada Microsoft: Ka ilaalinta Software-ka Qaali iyo Faa'iido iyadoo loo marayo Saqafka!
Waxaan aaminsanahay in dadka badankood ay wax xadi doonaan oo kaliya markay qasab ku tahay. Xaqiiqdii, waxaa jira dad badan oo wax u xadi doona dhibkiisa - laakiin uma maleynayo inay tahay aqlabiyad. Waxaan u maleynayaa inaan la hadlayo dad badan markii aan dhaho Software-ka Microsoft IS qaali ah. Sidoo kale, waligey wax rajo ah kama qabo weligiisba helitaanka taageero. Iyo - Waan ogahay inay tahay inaan ku tiirsanaado cusbooneysiinta si aan u sii wado software-ka. Iyo - Waan ogahay inay tahay inaan iibsado oo aan rakibo softiweer kale si aan uga ilaaliyo softiweerkeyga Microsoft weerarada xun.
Ereyga 'been abuur' ma ahan erey sax ah. Software-ka ma ahan mid been abuur ah… sanduuqyada CD-yada laga yaabo inay noqon karaan… laakiin software-ka waa software-ka dhabta ah ee Microsoft. La dagaalanka sharci darada la koobiyeeyay oo la rakibay softiweerku wuu sameeyaa MA ilaaliyo softiweerka kumana ilaaliyo macaamiisha. Macaamiisha jecel sheygaaga ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay bixiyaan lacagta sheygaas. (Waxaan bixiyay XP iyo Office XP)
Taasi waa wax aan caadi ahayn oo jahwareer ah oo jilicsan oo loogu talagalay Microsoft si ay u soo saaraan qoraallo caynkaas ah. Ma jiraa qof aaminsan in tani tahay farriin daacad ah? Tani waa dhibaatada maanta haysata Suuqgeynta, dadku ma rumeysna maxaa yeelay waa wax aan la rumaysan karin.
Ajax, DOM, RSS, XHTML, SOAP stuff waxyaalahaas oo dhan! Way ka fududdahay sidaad moodeysid!
Websaydhka Xiriirka Bulshada ee Wal-Mart ayaa fashilmay. $ 50 ilaa kaftanka ugu fiican!
Oktoobar 4, 2006 at 12:22 PM
"Waxaan aaminsanahay in dadka badankood wax xadi doonaan markay tahay inay wax dhacaan."
Waxaan sooooo raba inaan ku aamino. Waxaan aad u doonayaa inaan aaminsanahay in rootida rootida ee la xaday ay kaliya quudiso qoyska gaajaysan ee tuugga ah. Aad ayaan u doonayaa in taasi run noqoto…
Laakiin, maanta iyo maanta waxaan aaminsanahay in softiweerka, qofkasta barnaamijkiisa, lagu arko muraayadaha muraayadaha-sigaarka ee sanadaha hore ee Microsoft ee Windows 3. wax hing MAYA in koobiyeynta ay sax ahayd (!!!) laakiin taa badalkeeda Microsoft ma aysan sameyn 'uma maleynayo' nuqulka. (Gabi ahaanba run maahan laakiin taasi waxay ahayd aragtida.)
Ma aaminsani in Joe Average uu awood u leeyahay inuu si cad u kala sooco shaqada adag ee barnaamijyada la xushay, isagoo isku dayaya inuu nolol ka raadsado, iyo meheradaha ganacsiga-monoliths ee kaliya isku dayaya inay saxaan qiimo cadaalad ku ah alaabtooda. Sidan oo kale wax yar oo walaac ah ayaa ka qabta qaybta Joe ee barnaamijyada isaga ama iyadu ay "u adeegsadaan" qaab walboo sharci ama sharci darro ah.
Tani waa arrin aragti ah oo cillad ku jirta taas. Waa inaan iska bixino barnaamij kasta oo aan isticmaalno. Kaliya ma aaminsani in Joe Average uu sii wadayo isla aragtidaas.
waan ka xumahay… kaliya $ 0.02
Oktoobar 4, 2006 at 1:38 PM
Cudur daar looma baahna, William! Waxaan u maleynayaa inaan heshiiska ka dhawnahay sidaad moodeysid.
Waxay ila tahay in dooddu ay mudan tahay in laga doodo. Budhcad-badeeddu ma ka caawisaa shirkadda softiweerka iyada oo si wax-ku-ool ah ugu qaybisa barnaamijyada? Waan hubaa inay u qabato qaar.
Waxaa laga yaabaa inaan caqli gal u ahay fekerka dadka waawayn inay bixiyaan maxaa yeelay waxaan ku bixiyaa barnaamijka softiweer Waa inaan qiraa inaan adeegsaday softiweer budhcad badeed ah ka dibna mar dambe aan sidoo kale bixiyay. Mararka qaar maxkamadu way xadidan tahay walina ma hubin inay u qalanto lacagta.
Qalbigayga qalbigayga waxaan aaminsanahay in saadka iyo dalabku uu qiimeeyo xakamaynta. Adiga oo hareer maraya oo ku xaddidaya taas kontaroolada qofka ku qasbaya inuu iibsado, waxaan u maleynayaa inaad weydiisaneysid dadka inay iyagu xadaan.
Immisa ayey ku kacaysaa Windows-ku? $ 400? $ 100? $ 10 / mo? Maxay ugu qiimo badan tahay lacag badan kombuyuutar cusub (OEM) intii kombiyuutar la casriyeeyay? Waxaan u maleynayaa in qaab-dhismeedka qiimeynta uu asal ahaan khaldan yahay, Microsoft-na waxay dabeyli doontaa inay lacag badan ku bixiso Budhcad-badeedda halkii ay si fudud uga dhigi lahayd barnaamijyadooda mid la awoodi karo
Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga!
Oktoobar 5, 2006 at 8:56 PM
Waxaan rajaynayey in kuwa kale ay halkan ku soo biiri doonaan… laakiin hoog… Waxaan diyaariyey jawaab dhererkeedda ah isla markaana waxaan ku dhajiyay isla Jawaabtii Doug Karr…